Global Voices teny Malagasy » Shina: Mpiserasera nogadraina noho ny “fampielezana tsaho” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2019 8:02 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Nitranga tao Hangzhou tamin'ny 7 Mey 2009 ny lozam-pifamoivoizana , izay nitarika fahafatesana tovolahy iray ary fantatra fa i Hu Bin, tovolahy manana fianakaviana manankarena ilay mpamily. Nahasarika ny sain'ny olona manerana an'i Shina izany satria tsy mitovy amin'ny fitantaran'ireo nanatri-maso sy ny porofo mikasika ny zava-misy ny tatitra nataon'ny polisy momba ny hafainganam-pandehan'ilay fiara. Matetika ihany koa tafala amin'ireo fiampangana heloka bevava ireo mpamily fiara nahafaty olona noho ny kolikoly fanaon'ny polisy. Amin'ity tranga manokana ity, dia tapa-kevitra ny hiasa ho mpanaramaso ireo mpiserasera amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny fiavian'ny mpamily, ny hafainganam-pandehan'ny fiara ary manaraka ny antsipiriany rehetra momba ny tatitra ataon'ny polisy sy ny raharaham-pitsarana.
Tamin'ny volana Jolay, dia hitan'ny fitsarana fa meloka i Hu ka nanameloka azy higadra 3 taona an-tranomaizina . Na izany aza, maro ireo mpiserasera nihevitra fa tsy i Hu Bin tena izy ilay olona nanatrika ny fitsarana. Nandinika ny horonantsary tamin'ny alin'ny lozam-pifamoivoizana izy ireo ary nampitaha ilay olona tamin'ny horonantsary sy tao amin'ny fitsarana. Nitaky fitiliana ADN ny sasany tamin'izy ireo mba hanaporofoana ny mari-panondroana an'i Hu.
Raha maro ireo bilaogera sy mpiserasera nanoratra momba ny raharaha, nanapa-kevitra ny hiteny any amin'ny polisy ilay bilaogera Zhang Hongfeng  sy ireo bilaogera roa hafa Cheng Dalin  sy Yao Xiaoyuan ,  izay manan-danja kokoa noho i Xiong. Manangona ny lisitr'ireo bilaogera izay nanapa-kevitra ny hiteny any amin'ny polisy amin'ilay raharaha i Zhang.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/05/134532/
 nanameloka azy higadra 3 taona an-tranomaizina: http://www.zonaeuropa.com/200907b.brief.htm
 Zhang Hongfeng: http://yfwq.blog.sohu.com/130374637.html
 Cheng Dalin: http://shengdalin.blog.sohu.com
 Yao Xiaoyuan: http://yaoxiaoyuan.blog.sohu.com